သငျသညျတစျဆငျ့၏အားသာချက်ယူနိုငျသောအကြိုးကြေးဇူးမြား၏နံပါတ်ရှိပါသည် ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း အစီအစဉ်များ; သငျသညျပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး, လျှို့ဝှက်ချက်များ, privacy ကို, အခွန်ငွေစု (သင့်တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ပေါ် မူတည်. ) ရှာကြံသို့မဟုတ်ရိုးရိုးအမေရိကန်သို့မဟုတ်ဗြိတိန်၏အပြင်ဘက်သင့်လုပ်ငန်းကြီးထွားလာကြသည်ရှိမရှိ။ သင့်ရဲ့တိကျတဲ့လိုအပ်ချက်အပေါ်အခြေခံပြီး, အဲဒီမှာစိတ်ကိုထားနိုင်ဖို့ထောငျခြောတဲ့အရေအတွက်ကများမှာနှင့်ကုမ္ပဏီများဖွဲ့စည်းပိုင်ခွင့်တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ကိုရှေးခယျြတဲ့အရေးပါတဲ့ပထမဦးဆုံးခြေလှမ်းဖြစ်ပါတယ်။
ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီများသည်ဖွဲ့စည်းခြင်း, သို့မဟုတ်ကမ်းလွန်ထည့်သွင်းသင်တစ်ဦးနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံကိုရွေးချယ်ရန်လိုအပ်ပါသည်ဆိုလိုသည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ကိုနိုင်ငံတကာဖောက်သည်များအတွက်အနည်းငယ်ကွဲပြားခြားနားသောတန်ဖိုးကအဆိုပြုရှိပြီးအကျိုးကျေးဇူးများခြားနားသည်။ ဒီနေရာတွင်ပဲအချို့သောကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီထဲဆွဲသွင်းပါဝင်၏အထွေထွေအကျိုးကျေးဇူးများနေသောခေါင်းစဉ်:
အခွန်ကောက်ခံမှု (သင့်တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ပေါ် မူတည်. ကွဲပြားခြားနားသည်)
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖျော်ဖြေနှင့်ဥပဒေရေးရာ entity ၏နာမ၌ဘဏ်လုပ်ငန်းကိစ္စများကိုပို့ချသိသိသာသာ privacy ကိုအကျိုးခံစားခွင့်ပေးထားပါသည်။ အခြေခံအရာရှိများ, ဒါရိုက်တာများနှင့်ရှယ်ယာရှင်များများ၏အမည်များထိုကဲ့သို့သောနေးဗစ်နှင့်ဘေလီဇ်အဖြစ်အများအပြားတရားစီရင်မှုအတွက်ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီရဲ့ documentation ကနေချန်လှပ်ထားနိုင်ပါတယ်။ သူကပြောပါတယ်နှင့်အတူ, အဆောက်အဦများပြန်လည်သုံးသပ်ပညာရှင်များဖြစ်ပေါ်လိမ့်မည်ဟုဆန့်ကျင်ငွေကြေးခဝါချမှုဆိုင်ရာဥပဒေများရှိပါသည်။ အများစုမှာတရားစီရင်မှုမဆိုတတိယပါတီသို့မဟုတ်နိုင်ငံခြားအစိုးရ၏ရန်, အထူးပိုင်ရှင်၏အမည်များ, ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီများသည်ဖန်ဆင်းတော်မူသောထုတ်ဖော်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ဤသင်တန်း၏, မဟုတ်လျှင်, ပြစ်မှုဆိုင်ရာယုတ်မာသောလုပ်ရပ်များတစ်ခုလုပ်ရပ်သို့မဟုတ်မကြာသေးခင်ကာလ၌, အကြမ်းဖက်ဝါဒ, နေရာယူထားပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးလျက်ရှိသည်။
ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီများနှင့်ဥပဒေရေးရာဖွဲ့စည်းပုံသို့ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုနေရာယူအနာဂတ် liabilities ကနေကာကွယ်စောင့်ရှောက်တဲ့ခိုင်မာတဲ့အလွှာပူဇော်နိုင်ပါတယ်။ ကမ်ဘာပျေါတှငျတစ်ဦးချင်းစီ "အရာခပ်သိမ်းကိုထိန်းချုပ်, ကိုယ်ပိုင်ဘာမျှ။ " လို့ပြောပါလိမ့်မယ်တစ်ဦးစံပိုင်ဆိုင်မှုရှာဖွေရေးမှတဆင့်တွေ့ရှိရန်သူတို့ကိုခက်ခဲစေဘဏ်စာရင်းနှင့်သင့် entity ကပိုင်ဆိုင်သည်အခြားပိုင်ဆိုင်မှုရှိခြင်းအားဖြင့်အချမ်းသာဆုံးနှင့်အများဆုံးတရားဝင်ကာကှယျ၏အချို့။
တရားဝင်ပြိုင်ဘက်ဝတ်စုံကိုလိုက်စားလျှင်, ဒီပုံမှန်အားဖြင့်တစ်ဦးတရားစီရင်ခြင်းကိုချီးမြှင့်ခံရသင့်ပါတယ်တဲ့ပြန်လာရှိလိမ့်မည်သေချာစေရန်တစ်ခုပိုင်ဆိုင်မှုရှာဖွေရေးပါဝငျသညျ။ တစ်ဦးချင်းရဲ့နာမကိုအမှီပိုင်ဆိုင်မှုများကိုထားရှိခြင်း, သူတို့ကအလွယ်တကူအနေနဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုရှာဖွေရေးမှာတည်ရှိပါတယ်နိုင်ပါသည်။ ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီများသည်ဖွဲ့စည်းခြင်း နှင့်ကုမ္ပဏီမှပိုင်ဆိုင်မှု titling သူတို့မရှိတော့သင်၏အမည်ကိုမှချည်ထားသောနေကြသည်ကိုဆိုလိုသည်။ သို့ဖြစ်. သင်၏ပိုင်ဆိုင်မှုရိုးရှင်းစွာကမ်းလွန်ထည့်သွင်းခြင်းဖြင့်ဥပဒေရေးရာပြိုင်ဘက်, တရားသူကြီးများနှင့်တရားရုံးစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကနေကာကှယျနိုင်ပါသည်။
သငျသညျ၏အားသာချက်ယူနိုင်ပါသည်နောက်ထပ်အကျိုးကျေးဇူးရိုးရှင်းဖြစ်ပါတယ်။ အများစုမှာကမ်းလွန်တရားစီရင်မှုထည့်သွင်းစိတ်ဝင်စားသောသူမည်သူမဆိုပေါ်မှာရိုးရှင်းပါစေ။ OffshoreCompany.com ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီထဲဆွဲသွင်းပါဝင်အတွက်ကမ္ဘာကခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။ ငါတို့သည်သင်တို့၏မဟာဗျူဟာအတွက်ကူညီရန်နှင့်သင့်လိုအပ်ချက်များအတွက်ဝန်ဆောင်မှုအစီအစဉ်ကိုဖွံ့ဖြိုးဆဲ။